Taliska Booliska Soomaaliyeed oo sheegay iney wadaan qorshe wax looga qabanayo ciriiriga wadooyinka Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Cabdi Xasan Maxamed Xijaar Taliyaha Ciidanka Booliska Dowladda Federaalka ayaa Maanta oo sabti ah kormeer ku tagay Xarunta Taliska Ciidanka nabadgalyada Waddooyinka oo dibu habeen lagu sameeyay.
Taliye Xijaar oo warbaahinta kula hadlay Xarunta Taliska Ciidanka nabadgalyada ayaa waxaa uu sheegay in waddooyinka waaweyn ee Magaalada Muqdisho uu ka jiro Ciriiri farabadan oo dhibaatooyin kala duwan lagu qabo, loona baahan in wax laga qabto.
Waxaa uu sheegay Taliyaha Booliska in wax kala hago la la’yahay gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo waddooyinka Ciriiri ka dhigay, isagoona sheegay inay ka shaqeynayaan sidii loo heli lahaa qorshe wax looga qabanayo ciriiriga .
Taliye Xijaar ayaa tilmaamay in qorshaha la dejinayo uu ku jiro in Ciidan farabadan loo qoro kala hagista waddooyinka Muqdisho, isla markaana jidadka laga qaado gaadiidka jajabay oo muddo ka badan 30-sanno yaalla hareeraha waddooyinka qaarkood.
Isaga oo sii hadlaayay Taliyaha Ciidanka Booliska dowladda ayaa waxaa uu hoggaanada Ciidanka nabadgalyada Waddooyinka kula dardarmay inay sii laba jibaaran shaqooyinkooda, inta laga dhameystirayo qorshayaasha socda ee wax looga qabanayo Ciriiriga jira.
Si kastaba Waddooyinka waaweyn ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka jira Ciriiri farabadan oo dhibaatooyin kala duwan ku qabaan gaadiidleyda iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada, waxaana mararka qaarkood adkaata in qofka uu waddo mari waayo ciriiriga jira awgiis.